အင်တာဗျူး | Freedom News Group
Posts from the ‘အင်တာဗျူး’ Category
မြန်မာ အစိုးရ ဌာန များ ၏ အကျင့်ပျက် ချစား မှု ငွေကြေး အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်ဘီလျှံ နီးပါး ရှိ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက် တွင် အကျင့်ပျက် လာဘ်စား မှု ကို တိုက်ဖျက်
မည် ၊ အစိုးရ ဌာန များ ၏ လာဘ်ငွေ တောင်း ခံ မှု များ ကို Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Jul 18
4 Comments	လော်စစ်ဟန် ကို ခြေရာ ကောက် သော်
တင်ကျော်ကျော်စိုး ၊ ၊လော်စစ်ဟန် ရဲ့ဘ၀ ကို ခြေရာ ကောက် တဲ့ အခါ မှာ အညတရ
ကိုးကန့်– တရုတ် မိသား စု က နေ မွေးဖွား လာခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး ဆယ် ကျော် သက် အရွယ် မှာ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Jun 22
25 Comments	The Face of Buddhist Terror
His face as still and serene asastatue’s, the Buddhist monk who has taken the title “the Burmese bin Laden” begins his Read more
Home / China / Politics Myanmar ‘welcomes Chinese enterprises and projects’
Myanmar President U Thein Sein said on Saturday his country is eager for Chinese
investment, especially when it can create jobs. Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Apr 8
8 Comments	သတင်း ဓာတ်ပုံ သမား တစ်ဦး ရဲ့မိတ္ထီလာ မြို့ အသက်ဘေး အတွေ့အကြုံ
မတ်လ(၂၂)ရက်ဝန်းကျင်လောက်က မိတ္ထီလာကို သတင်းလာယူတဲ့ မီဒီယာ အုပ်စုတစ်စုကို
အဖျက်သမား အုပ်စုတစ်စုက မီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တယ်။ အဲဒီထဲမှာ နိုင်ငံခြား Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Nov 30
နိုဝင်ဘာလ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၃ နာရီမှာ မုံရွာမြို့နယ် လက်ပံတောင်း တောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း သပိတ်ကို အစိုးရ လုံခြုံရေး ရဲ တပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။ သပိတ်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲနေတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ၁၀၀ ကျော် မီးလောင် Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Oct 5
1 Comment	မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့စကားလက်ဆုံ ကျခြင်း
Bill Keller: နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကို မမေးခင်မှာ သမတကြီးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေ
ကို မေးချင်ပါတယ်၊ အမေရိကန်လူမျိုးတွေက သမတကြီးကို ကောင်းကောင်းသိပ်မသိကြသေးဘူး Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Sep 19
1 Comment	အယ်(လ) ခွန်ဖန် ကို လုပ်ကြံခဲ့ သည့် ဇော်ဆိုင်း လွတ်မြောက်လာ
KIA ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ ကွန်မန်ဒို လဖိုင်ဇော်ဆိုင်း ပြန်လွတ်လာပါပြီ။
သူက မြန်မာ့တပ်မတော်တိုင်းမှူးတယောက်ကို လုပ်ကြံမှုနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ၂၇ နှစ် နေခဲ့ရသူပါ။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Sep 18
1 Comment	ရဲဘော် ဖိုးသံချောင်းနှင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ် ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်
(သတင်းထောက် ကိုညို က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောခွင့်ရ ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်းနှင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအပေါ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
မေး။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဇောကို ပါတီခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုမခေါ်တာ ဘာကြောင့်လို့ထင်မြင်လဲ? Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Aug 28
1 Comment	ဒုသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
ဖခင် ဒုတိယတောအုပ် (သစ်တော) ဦးစိန်မောင်နှင့် မိခင်မူလတန်းပြဆရာမ ဒေါ်သိန်းတင်တို့က
၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါ ရီ (၁၂) ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီ ခရိုင်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ဂုံးလမ်း Read more
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,726,457 hits